Slow Cooker Shredded Beef (Tacos နှင့် Enchiladas များအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဘယ်သူသည်အကောင်းဆုံးကြော် pickles ရှိပါတယ်
Slow Cooker Shredded Beef (Tacos နှင့် Enchiladas များအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ )
ဤနေရာသည်တာကိုများအတွက်အမဲသားလုပ်ရန်အရသာရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် မြေပြင်အမဲသား Taco ဒါမှမဟုတ် အသားတုတ် (ပျော့သို့မဟုတ် crunchy) သို့မဟုတ်ပင် enchiladas! ၎င်းကိုထိပ်ဖျား tangy horseradish ငံပြာရည် ဒါမှမဟုတ် အိမ်လုပ်ဆဲလ်ဆာ လတ်ဆတ်တဲ့အရသာသည်။
ကျန်ရှိသောသို့လှည့်နိုင်ပါတယ် မေး , ရက်တွေ သို့မဟုတ်ကျော်အစေခံ အိမ်လုပ် arepas နောက်တစ်နေ့နေ့လည်စာအတွက်! မြေ၌အမဲသားအစားထိုးရန်၎င်းကိုသုံးပါ taco လက်စွပ် ပါတီအကြိုက်ဆုံးအတွက်!
၂၁ ရက်ကယ်လိုရီ ၁၂၀၀ အတွက်အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ လွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးလေးပါ၊ tortilla တစ်လုံးကိုဒိန်ခဲအနည်းငယ်၊ အသားအနည်းငယ်အသားတင်နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူမကပ်မကပ်ထားသောဒယ်အိုးနှင့်ထိပ်တွင်ထားပါ။ ဝက်အတွင်းခေါက်ပြီးလျှင် crisped သည်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ လွယ်ကူပြီးအံ့သြဖွယ်ပါ!
ပထမကင်သည်အညိုရောင်ထွက်ခြင်းကိုမရှောင်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်အရသာအရသာထပ်ထည့်သည် (ထပ်ထည့်ခြင်းကဲ့သို့) အိမ်လုပ် taco ရာသီ )! ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့်အရည်ကိုချုံ့ရန်နှင့်ချုံ့ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်အားနှေးသောမီးဖိုထဲမှကျွန်ုပ်ဆီသို့လောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဟင်းရည် separator ။ ၎င်းသည်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်နီများကိုခွဲခြားပေးပြီးအဆီများအားလုံးကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ဒီစာရွက်ကိုကာဗွန်အနိမ့်အမြင့်အတိုင်းဆက်ထားရန် tortillas ကိုကျော်ပြီးaသို့ပြောင်းပါ taco သုပ် !
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၀ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၁၀ နာရီ ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၀ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ဤသည် tacos (ပျော့သို့မဟုတ် crunchy) သို့မဟုတ် enchiladas ပင်အမဲသားလုပ်ဖို့အရသာနည်းလမ်းတစ်ခု! ငါကျန်နေသေးတဲ့အတွက်လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နေ့နေ့လည်စာစားဖို့မေးခွန်းတွေမေးလေ့ရှိတယ်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၂၈ အောင်စ enchilada ငံပြာရည်
▢၁ ကြီးမားသည် ကြက်သွန်နီ အရက်
▢၁ အလွန်စပ်သောမက်ဆီကန်ဂျလပီနိုငရုပ်သီး အစေ့နှင့်ကုန်တယ် (optional)
▢နှစ် လေးညှင်းပွင့် ကြက်သွန်ဖြူ အချပ်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဇီမြေ
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငရုတ်သီးမှုန့်
▢3-4 အလေးချိန်ပေါင် ကင်ကင်
ကြက်သွန်နီ၊ ဂျလန်းပါနီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုချက်ပြုတ်သည့်အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ ကင်ထည့်ပါ။ ထိပ်ပိုင်းကျော် enchilada ငံပြာရည်လောင်း။
နိမ့်ကျ 8-10 နာရီပေါ်ကွတ်။ ကြီးမားသောလင်ပန်း၌အမဲသားကိုဖယ်ရှားပါ။2ချိတ်ကိုအသုံးပြုပြီး, အဆီမဆိုအသားစွန့်ပစ်ဖျက်စီး။
ကျန်ရှိနေသောအရည်များကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ခန့်မှန်းမှလွဲ။ ကြက်သွန်နီနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အားလုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အနှေး cooker မှ 1 ခွက်။ ကြိတ်ခွဲထားသောအမဲသားကိုနှေးနှေးသောချက်ပြုတ်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီးနှိုးပါ။ သငျသညျလိုချင်သောကိုက်ညီမှုရောက်ရှိသည်အထိသိုလှောင်အရည်ထည့်ပါ။
tacos အတွက်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သို့မဟုတ် enchiladas အတွက်အသုံးပြုပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ဘေးထွက်တွင်ကြက်သွန်နီနှင့်ငရုတ်ကောင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်
သော့ချက်စာလုံးဖျက်စီးထားသောအမဲသား၊ နှေးနှေးသောချက်စက်၊ သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
အနှေး cooker BBQ အမဲသားသားညှပ်ပေါင်မု